Febraayo 2015 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Febraayo 2015
Cimilada dhaadheer iyo duulimaadka jiifka ee Uludag
Cadho culus iyo lodos oo ku taal Uludag duulimaadyada xariiqda ayaa saameyn ku yeeshay: Duulaanka culus iyo lodos ee Uludag, gaadiid kaxeynta gawaarida lama sameyn karin Sarıalan. In kasta oo ceeryaamo culus ay jiraan, barafka qaar uma uusan dhaafin dooxooyinka madhan. jiga waaweyn Turkey ee ski [More ...]
Izmir Metro Inc. Mas'uuliyadda Omak Lift
İzmir Metro Inc. Waajibaadka waxaa iska leh shirkadda 'Omak Mount Company': İzmir Metro Ka dib shilkii ka dhacay Üçyol Station shalay fiidkii, İzmir wuxuu soo tebiyay eedeymaha ah in “dayactir xilli xilli ah aan lagu sameynin yapıl wararka qaar. [More ...]
Intii uu ku socday wadada tareenka, waxa uu ku sii jeeday tareenka: Qofka waxyeelada culus ka soo gaadhay shilkii tareenka rakaabka markii uu marayay jidka tareenka waxa uu naftiisa ku waayay cisbitaalka. 61-sano jir Hüseyin İçpınar, oo loo bartay inuu maskax ahaan degenayn degmada Sarayköy ee Denizli [More ...]
Waxaa lagu eedeeyay takoor Kocaoglu: Nidaamka xadiidka Izmir malaha sabab la'aan Duqa Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, "Mudane Raiisel wasaare, aad ayaan uga xunahay inaan nidhaahno waxaan sameyneynaa takoor" ayuu yiri. Kocaoğlu oo ka qeybqaatay barnaamij ka socday barnaamijka Ege TV wuxuu yiri “2004-2009 [More ...]
Samsun waxay sameeyeen feerka taraamka! Rugaha waxaa la abaabulay
Samsun Tram Malfunction! Moodhadhka Mobilidda: Gaadiidka nidaamka tareenka ee Samsun sababtuna waa burburka daqiiqadihii 40 ee carqaladaynta, kooxda dayactirka SAMULAS oo isla markiiba faragelin ku sameeyay oo muddo ka hor tartameysay [More ...]
Shirkadda Telefoonada ee "Yenimahalle-Sentepe Cable" 2. shaqada heerka
Yenimahalle-Şentepe Ropeway khadka 2. howlaha masraxa: 2 ee khadka gawaarida fiilada ee u adeega Yenimahalle-Şentepe ee gaadiidka dadweynaha. Rakibida xamuulka rakaabka ayaa la bilaabay. 2. 58 rakaabka rakaabka ah oo loo adeegsado marxaladaha xargaha [More ...]
Istanbula 3 sheekada tareenka maraysa (Video)
Marinka tuubbada İstanbula 3: marinka dhuumaha xNUMX dabaq ee u dhexeeya Gayrettepe iyo Küçüksu waxaa laga dhisi doonaa Istanbul. Raiisel wasaare Davutoğlu ayaa kahadlay soo bandhigida mashruuca Mega Project KASOO BAXAN EE MADAXWEYNE SIILAANYO AHMET DAVUTOĞLU QARAXII AY KU SAMEEYEY MASHRUUCKA MEGA [More ...]
Gaadiidka Bursan waxaa lagu soo saarayaa Bursa
Wadada taraafikada ee Bursa waxaa lagu soo saari doonaa Bursa: Nidaamka gaadiidka xadiidka fudud ee Bursa wuxuu hadda adeegsan doonaa taraamyada iyo gaari-gacmeedyada laga soo saaray Bursa. Durmazlar 12 tram waxaa soo saari doona 14. [More ...]
Yozgat tareenka xawaaraha sare si uu u noqdo fursad
2018 wuxuu soo afjarayaa tareenka xawaaraha sare leh ee Yozgat waa in loo beddelaa fursad: 7 Salim Kahramanoğlu, oo isagu ku dhawaaqay inuu yahay musharrax ka tirsan xisbiga AK ka hor doorashooyinka la qaban doono bisha Juun, ayaa liis gareeyay shaqadooda. Murashax murashaxnimada kuxigeenka AK Party Salim [More ...]
Maanta taariikhda: 28 Febraayo 1888 Hirsch si loo furo iskuulada Yuhuudda ee Galisyey Bugün
Maanta taariikhda 28 Febraayo 1888 ayaa ku deeqay Hirsch 12 million si ay u furto dugsiyada Yuhuudda ee Galicia. Markii dhismaha Belova-Vakarel uu dhammaaday Bulgaariya waxay qabsadeen Dowladaha Boqortooyada ee diiday in ay soo duullaan.
Nylon yar yar ee Erciyeste
Isboortiga Nylon ee Erciyes: Dalxiisyada ciyaaraha barafka ee loo yaqaan 'Erciyes ski Resort' waxaa ka buuxa fasax usbuuc-dhammaadka iyo sidoo kale usbuuc-dhammaadka. 2 kun 200 mitir oo ku taal Tekir plateau halkii laga isticmaali lahaa skis kireysanaya jekkiyo iyo nylon waxay doorbidayaan barafka [More ...]
Skiing at Erciyeste toddobaadkii
Erciyeste raaxeysiga barafka inta lagu jiro usbuuca: 2 kun oo 200 mitir oo ku taal Tekir plateau halkii laga kireyn lahaa barafka maalinta halkii ay ka isticmaali lahaayeen barafka iyo dharka, [More ...]
Saklıkentte waxay qabanqaabisaa xafladaha barafka iyo jimicsiga
Dharka barafka iyo ciyaarta barafka waxaa lagu abaabulay magaalada saxda ah: Degmada Konyaalti waa mid ka mid ah xarumaha barafka ee ugu muhiimsan dalka Turkiga. Tartanku waa mid abaabulan. Atiye sidoo kale wuxuu soosaaraa farshaxan gacmeedka Atiye [More ...]
Davraza halka uu ku yaala dabbaal-degga cayaaraha
Bartilmaameedka xarunta dhexe ee Davraza: Madaxweynaha Turkiga Ski Federation Erol Yarar, Davrazâ waa macdan qodista dahabka u ah Isparta iyo waddanka, '' Tani kaliya maahan Turkiga, waa adduunyada kaliya. One n mid ka mid ah meelaha lagu ordo ee barafka lagu ciyaaro [More ...]